अञ्जु पन्त राहत बाँड्ने बहानामा बाइबल बाड्न बारा पुगेको तस्विर भाइरल, के हो यथार्थ ? — sancharkendra.com
काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्त राहतका सामग्रीका साथ क्रिश्चियन धर्मग्रन्थ बाइबलका बन्डल बोकेर हावाहुन्डरी पीडित जिल्ला बारा र पर्सा पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्वीर भाइरल बनेको छ ।
पीडाको आहतमा रहेका फेटालगायतका बासिन्दालाई अहिले राहत बाँड्न विभिन्न संस्था र व्यक्ति पुगिरहेका बेला पन्त पनि पुगेको भन्दै उक्त तस्वीर भाइरल बन्यो । उनले राहतका सामग्रीसँगै धर्म प्रचारमा पनि सक्रियता देखाएको आशंका पनि धेरैले गरे ।
पन्तले हिन्दुबाट धर्मान्तर गरि क्रिश्चियन स्वीकार गरेकी थिइन् । हिन्दु धर्मको विरोध गरी गीत गाएको भन्ने आरोपको सामना उनले गर्न परेको थियो । बारा र पर्साका पीडित समुदाय भने, मुस्लिम र हिन्दु रहेका छन् । मृतकको संख्या मुस्लिमको ज्यादा रहेको विवरणहरू आएका थिए ।
पीडामा पनि धर्म प्रचार गरेको भन्दै धेरैले गायिका अञ्जुलाई अहिले गालीगलौज गरिररहेका छन् । तर के अञ्जु पन्त धर्म प्रचार गर्न बारा पुगेकी हुन् त ? बुधबार भने अञ्जु पन्त बारा गएकी छैनन् । बुधबार बिहान ११ बजे उनी रेडियो नेपालमा भेटिइन् । रेडियो नेपालको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजित राष्ट्रव्यापी आधुनिक संगीत प्रतियोगिताको जज (निर्णायक) भएकाले व्यस्त रहेको उनले बताइन् ।
‘मेरो लगातार गीत रेकर्डिङ पनि चलिरहेको छ । म यो पटक बारा जान पाएको छैन, तर हामीले सहयोग पठाएका छौं,’ उनले टेलिफोन कुराकानीमा भनिन् । रेडियो नेपालले पनि मंगलबार विहान अञ्जु कार्यालयमा व्यस्त रहेको पुष्टि गरेको छ ।
अञ्जुले आफ्नै नाममा अञ्जु पन्त फाउण्डसेन खोलेकी छन् । त्यसमार्फत विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएकी छिन् । उनका अनुसार केही पहिले उनी सहयोग लिएर बारा पर्सा लगायतका तराईका जिल्ला गएकी थिइन् । त्यहीबेला खिचेको तस्वीर अहिले भाइरल बनाइएको हो ।
आफूले गीत संगीतबाट कमाएको रकमको केही अंश समाजसेवामा लगाउन चाहेको, तर पटकपटक गलत प्रचार गरेर निराश बनाउन खोजेको उनको गुनासो छ । उसो त अन्जु पन्त बेलाबखत विभिन्न कारणले विवादमा तानिरहेकी हुन्छिन ।
गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा जति भावुकताको मिठास अरुका स्वरमा विरलै भेटिएला । एउटा गजलमा भरेको स्वरले दिएको उचाईसँगै अञ्जुको गायन यात्राले पनि गति लियो । गायन नेपालमा एउटा राम्रो पेशा पनि बनिसकेको छ ।
अन्जुले बिहेका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादीत छ । उनले बिहेलाई काँडा भनेकी छन् भने जीवनसाथीको अपमान गरेको भन्ने अभियोग पनि लाग्दै आएको छ ।
कर्णालीका सबै कारागारमा एकसाथ स्थापना गरियो पुस्तकालय
टिगरिस नदीमा डुंगा डुब्दा ९२ जनाको मृत्यु, यस्तो छ थप क्षतिको विवरण